सबिताको परिवारमा मुस्कान, कहाँ बाट कसरी आयो यति धेरै सहयोग ‘भिडियो सहित्’ « Etajakhabar
सबिताको परिवारमा मुस्कान, कहाँ बाट कसरी आयो यति धेरै सहयोग ‘भिडियो सहित्’
प्रकाशित मिति : १० असार २०७७, बुधबार १९:५७
मोरङ- मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा न. ४ निवासी सबिता श्रेष्ठको श्रीमान मिलन थेबे ( लिम्बू ) विगत २ बर्ष देखी स म्प र्क बिहिन भएका छन् । कमाउन जान्छु भनि हिडेका श्रीमान उता उतै सम्पर्क बिहिन भए पछि सबिताको जिवन निकै कस्टकर बन्यो । श्रीमान आज पो आउछन् कि भोली पो आउछन् कि भन्दै बाटो हेर्दा हेर्दै २ बर्ष बित्यो ।
युटुब च्यानल ईस्वर दुलालमा भिडियोमा समाचार बाहिरिए पछि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा न. ९ निवासी हाल हंङकङ बस्दै आएका नरेश नाल्बो
बाट १० हजार, स्व. बिष्णुमाया लिङथेपको तिथीको अबसर पारी उहाँको परिवार जन बाट १६ हजार पाँच सय बराबरको आर्थिक तथा रासन सहयोग आयो ।
को हुन इशा गुरुङ ?
बेलायतमा रहेर लामो समयदेखि सामाज सेवा गर्दै आउहुने समाजसेवी तथा सामाजिक अभीयान्ता इशा गुरुङको नेपाल घर पोखरा हो । नेपालीहरुलाई दु: ख परेको देख्ना साथ उहाँले सहयोग गरि हाल्नु हुन्छ । उहाले धेरै गरीब दु: खीलाई सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ । समाजमा उहाँको निक्कै ठुलो योगदान रहेको छ ।
रमा ओलि नेपाल हुनुहुन्छ उहाँको घर सुर्खेत जिल्ला हो । उहाँ पनि सामाजिक कार्य अथवा समाज सेवामा खटिनु हुन्छ । हिँजो आज हाम्रो समाजमा विभिन्न प्रकारका जातीय भे द भा व ह, त्या, हिं, सा, ब, ला, त्कारी जस्ता ज, घ, न्य अपराध भईरहेका छन । यस बिरूद्ध र यस्ता घटनाहरू रोक्नुपर्छ भनि सरकारलाइ दवाव दिने उद्देश्यले आवाज उठाउनु हुन्छ । गरिबलाई अन्याय हुदा न्यायको लागि लड्ने एक सचेत नागरिक भनेर रमा ओलि लाइ चिनीन्छ ।